सामान्य रेष्टुरेन्टमा प्लास्टिकको स्टुलमा बसेर ओबामाले खाएको डिनरको मूल्य कति ? - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : मङ्गलबार, मङि्सर ११, २०७५१३:०९ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
एजेन्सी, साताव्यापी एसिया भ्रमणमा निस्केका अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको अहिले एक तस्बिरको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ । तस्बिरमा ओबामा भियतनामको होनाई सहरको एउटा सामान्य रेष्टुरेन्टमा प्लास्टिकको स्टुलमा एक हातमा बियरको बोतल लिएर बसेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसस्थाले रेष्टुरेन्टका मालिकलाई नै जानकारी नदिइकन ओबामा त्यहाँ डिनरका लागि गएका थिए। ‘ओबामा हाम्रो रेष्टरेन्टमा आउनु आश्चार्यको कुरा हो, उहाँ यहाँ आउनु होला भन्ने हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौं’ रेष्टरेन्टकी मालिक ५४ वर्षिया निग्युन थि लिएनले भनिन्। ओबामा आउनुपूर्व विदेशी टेलिभिजनको टोली रेष्टुरेन्टमा आउँदा उनलाई ओबामा आउने पत्तो नै थिएन।
ओबामा रेष्टुरेन्टमा आएको पत्तो पाएपछि बाहिर उनलाई हेर्न चाहनेको भीड लागेको थियो । ओबामाले रेष्टुरेन्टमा बसेर कति मुल्य बराबरको खाए होलान सबैको कौतुहल्ताको बिषय बन्यो तर रेष्टुरेन्ट मालिक लिएनका अनुसार उक्त खानाको मूल्य जम्मा ६ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ नेपाली जतिको थियो ।
आखिर ओबामापुत्री किन गरिरहेकी छन् रेष्टुरेन्टमा वेटरको काम ?
नेताहरुका छोराछोरी बाउको पद भजाएर खान व्यस्त रहन्छन् । अझ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका छोराछोरीको शानै बेग्लै हुने गरेको छ। तर, विश्व शक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको छोरीको काम भने अनुकरणीय छ ।
उनका पिता विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपति हुन् । उनी व्हाइट हाउसमा सुखसुविधाका साथ बस्छन् । तर, उनकै छोरी साशा ओबामा भने व्हाइट हाउसको ऐशआराम छोडेर एउटा रेष्टुरेन्टमा वेटरको काम गरिरहेको धेरैले नपत्याउन पनि सक्छन् ।
तर, १५ वर्षीया साशा गर्मी विदामा म्यासाचुसेट्सको मार्था वाइनयार्डको एउटा रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेकी छन् । रेष्टुरेन्टमा उनी वेटरको काम गरिरहेकी हुन् । बोस्टन हेराल्डका अनुसार साशा (जसको पूरा नाम नताशा हो) का साथमा रेष्टुरेन्टमा उनको सुरक्षाका लागि खुफिया विभागका ६ जना एजेन्ट पनि आउने गर्दछन् ।
ओबामा परिवार गर्मी विदामा सधैजसो यो सहरमा आउने गर्दछ । तस्वीरमा राष्ट्रपति ओबामाकी कान्छी छोरी साशालाई रेष्टुरेन्टको वेटरका आधिकारिक पोसाक निलो टिश सर्ट र क्यापमा रिसेप्सनमा काम गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ । साशाका साथमा काम गरिरहेका कर्मचारीले हेराल्ड पत्रिकासँग भने–उनी तल्लो फ्लोरमा काम गर्छिन् ।
हामी त चकित थियौ, जब उनी यो काममा आउँछिनतब उनका साथ ६ जना पनि साथमा किन आउँछन् ? पछि थाहा भयो कि उनीहरु को हुन् । व्हाइट हाउसले साशाको कामका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
तर मिशेल ओबामा सधैं भन्ने गर्छिन् कि उनी आफ्ना छोरीहरुलाई सामान्य तरिकाले हुर्काउन चाहन्छिन् । टेक अवे काउन्डरमा काम गर्नुका साथै साशाको काम टेबुलमा ग्राहकलाई भोजन पुराउनु र लञ्चका समयमा रेस्टुरेन्टलाई ठिक गर्न सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साशाभन्दा पहिला उनकी दिदी मालियाले फिल्मको सेटमा दुईपटक इन्टर्नशिप पनि गरेकी थिइन् । पश्चिमी मुलुकहरुमा ठुला हस्तीहरुका सन्तानलाई यसप्रकारको काम गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन ।
डेभिड र भिक्टोरिया बेकहमका छोरा ब्रुकलिन बेकहम लण्डनमा फिल्म मेकर गाय रिचीको कार्यालयमा काम गरिसकेका छन् ।
बुहारीले सासु कुट्दा ८ बर्षीय बालकले लुकेर खिचिन् भिडियो !